Wasiirrada iyo Xildhibaannada Hirshabeelle oo labo magaalo ku kala shiraya | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Wasiirrada iyo Xildhibaannada Hirshabeelle oo labo magaalo ku kala shiraya
Wasiirrada iyo Xildhibaannada Hirshabeelle oo labo magaalo ku kala shiraya
Xildhibaannada iyo Wasiirrada Maamulka Hirshabeelle ayaa maanta ku kala shiraya magaalooyinka Balcad iyo Jowhar oo ka wada tirsan Shabeellaha dhexe.
Maamulka Hirshabeelle wali ma uusan faah faahin shirarka maanta ka kala dhacaya Magaalooyinka Jowhar iyo Balcad ee ay yeelanayaan Xildhibaannada iyo Wasiirrada Maamulkaas.
Wasiirrada uu shir guddoomin doono Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullahi Cosoble,waxaa ay ku shiri doonaan Magaalada Balcad,halka Xildhibaannadana ay ku shiri doonaan Xarunta Maamulkaas ee Magaalada Jowhar.
warar hoose oo ay heshay Warbaahinta ayaa sheegaya in shirarkan diiradda lagu saarayo magacaabista maamullada degmooyinka ee uu dhawaan sameeyay Madaxweynaha Hirshabeelle iyada oo xildhibaanno badan oo ku jira Baarlamaanka Maamulkaas ay madaxweynaha ku dhaliileen sida uu u marayo magacaabista maamullada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe oo uu isbeddel ay dadka qaarkii ka qeyliyeen ku sameeyay.
Maamullada Balcad,Mahaddaay iyo kuwo kale oo ka tirsan Shabeellaha dhexe ayuu isbeddel ku sameeyay Madaxweynaha Hirshabeelle,waxaa kale oo uu isbeddel ku sameeyay maamulka Gobolka Hiiraan,kan Baladweyne iyo Matabaan.